विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु चानचनुे कुरा होइन । हिम्मत गरेर आठ हजार ८४८ मिटर अग्लो चुचुरो आँक्नेमध्ये थोरैले मात्र पाइला टेक्न सक्छन् ।
हिउँको बाटो, हिउँको माटो, हिउँकै पहाड, हिउँकै जङ्घार, जताततै हिउँकै संसार । त्यही हिउँ संसारमा रम्न सक्ने दृढआत्मविश्वासको भारी बोकेर उकाली लाग्नुभयो ललितपुरकी कल्पना महर्जन । आधार शिविरबाट देख्दा, सेता हिउँमाझ सेतो गुराँस फुले झै अग्लिएको सगरमाथाले उहाँको मन हरेक पल मोहित पार्दैथियो । मनभित्रैबाट उब्जेको त्यही मोहको डोरीमा हिउँरेखामाझ तानिँदैतानिँदै उहाँ शिखरतर्फ लम्कनुभयो ।
“अब म मर्दै छु भन्ने अनूभूति भयो, अनि जीवनको अन्तिम क्षण सम्झेर सेल्फी भिडियो खिच्न थालेँ ।”
नेपाल मोहडाको अनुभवको अर्काे वर्ष तिब्बत मोहडाबाट विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहण उहाँका लागि अर्काे नौलो र आश्चर्य थियो । जब आठ हजार ३०० मिटरको उचाइँमा पुग्नुभयो । तब परिस्थितिले एक्कासी कोल्टे फेर्यो । अक्सिजन सकियो । न त तल ओर्लिनु न माथि उक्लनु । चिसो सिरेटोले ओठ सुक्न थाले । तल-तल हिउँको फाँट छ । सेता कुहिरामा कहिले घाम कहिले छायाँ पर्दै गरेको दृष्य पनि उहाँलाई धमिलो लाग्न थाल्यो । अक्सिजन भएको आफ्नो टेन्टमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । अक्सिजन लिन गएका सहयोगी फर्किएनन् ।
हिमाल आरोहण गर्दा धेरै मान्छे मर्छन् । कसरी मरे भन्ने खासै अभिलेख छैन । हिमाल चढ्ने मान्छे मर्ने या बाँच्ने ५०/५० प्रतिशत सम्भावना हुन्छ । सत्य स्वीकारेर आरोहण गरिन्छ । मनमा अनेक तर्कना खेल्दै गर्दा जीवनको अन्तिम क्षणमा तालिममा सिकेको कुरा झट्ट याद आयो, कल्पनालाई ।
जीवनको त्यही अर्थपूर्ण घडीमा कल्पनाले आफूलाई बलियो बनाउनुभयो । आफूँ मरेको प्रमाण के त ? मरेपछि मेरो शरीर फिर्ता गयो भने मान्छेले कल्पना यसरी मरेकी रहिछ भन्ने कुरा थाहा पाओस् भनेर सेल्फी भिडियो लिएको उहाँले आफ्नो अनुभूति सुनाउनुभयो ।
“म ८ हजार ३०० मा छु, अक्सिजन सकिएको छ, अहिले म अर्काको टेन्टमा छु । शेर्पालाई अक्सिजन खोज्न पठाएको छु । अक्सिजन पायो भने बाँच्छु, नपाए मर्छु”, अभिलेख गरिएको भिडियोमा उल्लेख भएका शब्द सुनाउनुभयो ।
त्यतीबेला उहाँ आफ्नो अक्सिजन भएको टेन्टमा पुग्न सक्नुभएको थिएन । धन्न ४५ मिनेटपछि अक्सिजन आयो र उहाँले नयाँ जीवन पाउनुभयो । सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्दा अलौकिक मात्रै लागेन नयाँ जीवनको शुरुवातको महुस गर्नुभयो उहाँले । उहाँका जीवनका आरोह अवरोह पुस्तकाकारका रुपमा पनि आउँदै छ । जीवनको अन्तिम सङघर्षको क्षण त्यो मात्रै होइन । धेरै ठक्कर र मृत्युको दोसाँधबाट उछिट्टिएर नयाँ जीवन पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
लेक लागेर होश गुम्दा…
सगरमाथा चढ्नुअघि हरेक आरोहीले अन्य साना हिमाल चढेर तालिम लिनुपर्छ । त्यही सिलसिलामा उहाँले ६ हजार मिटरको सोलुखुम्बुको मेरापिक चढ्दै हुनुहुन्थ्यो । ५ हजार ३०० मिटरमा पुगेपछि लेक लागेर होश गुम्यो ।
“डेथ जोनमा पुगेको मान्छे फर्केर आएँ, मेरो तेस्रो जीवन हो, नाफाको जीवन समाजलाई दिन चाहन्छु”
सात दिन कोमामा बस्नुपर्यो । सबैले आश मारेका थिए । तर, दैवले फर्काइदियो । आफ्नो जीवन नाफाको भएको बताउने कल्पनाले सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेर लिइएको सङ्कल्प ‘शिक्षाको माध्यमले बालविवाह रोकथाम अभियान’ साकार पार्न थाल्नुभएको छ । “डेथ जोनमा पुगेको मान्छे फर्केर आएँ, मेरो तेस्रो जीवन हो, नाफाको जीवन समाजलाई दिन चाहन्छु”, कल्पनाले थप्नुभयो ।
गिनिज बुकमा नाम दर्ता
पर्यटन विधामा पत्रकारिता गर्दै अाउनुभएकी कल्पनाले ठूलो सङ्घर्षका साथ सन् २०१८ र २०१९ मा नेपाल र तिब्बतको दुबै मोहडाबाट सगरमाथा चढ्नुभयो ।
दुवै मोहडाबाट सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली महिला पत्रकार दावी गर्ने उहाँले ‘गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्ड’मा नाम दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । संयोगले नेपाली र अङ्ग्रेजी एउटै मितिमा उहाँले सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो । दुवै वर्षको आरोहण अङ्ग्रेजी तारिख मे २३ थियो भने नेपाली मिति विसं २०७५/२०७६ को जेठ ९ नै परेको थियो ।
बालविवाह रोकथाम अभियान
समाजमा बढ्दो बालविवाह छ । अहिले त जन्मदर्ता लुकाएर बाल विवाह गरिन्छ । नेपालको कानुनले बन्देज लगाएकाले र समाजको निगरानी बढ्न थालेकाले भारतमा पुगेर विवाह गर्ने चलन बढेको छ । धेरै जसो बालविवाह गरीब अशिक्षित परिवारमा हुने गरेको देखिन्छ । मण्डपमा गएर केही विवाह रोक्दैमा र परिवारलाई भनेर मात्रै बालविवाह रोकिन्न । शिक्षाको ज्योतिबाट मात्रै रोक्न सकिन्छ भन्ने निधोका साथ कल्पनाले ‘शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल’का अध्यक्ष रविन्द्र महर्जनसँग मिलेर एउटा अध्याय शुरु गर्नु भएको हो ।
भानुदयबाट अभियान सुरू
ललितपुर जिल्लाको महाङ्काल नगरपालिका–६ मा रहेको भानुदय आधारभूत विद्यालयबाट कल्पनाले सङ्कल्प पुरा गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । तालमिप्राप्त विद्यालय व्यवस्थापक सगेन्द्र श्रेष्ठलाई स्कुलमा परिचालन गरिएको छ । काम शुरु गर्दा १५ जना बालबालिका थिए । अहिले १८० जना पुगेका छन् । गाभिन लागेको स्कुलको साख यही कार्यक्रमले बचेको दावी गर्नुहुन्छ, श्रेष्ठ । उहाँले नीजि¬सरकारी–साझेदारीमा जरादेखि नै स्कुल परिवर्तनमा आफूले भूमिका रहेको बताउनुभयो ।
“स्कुलमा परीक्षणका रुपमा काम थालेका छौँ, त्यसको नतिजाको आधारमा विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने अन्य १२६ स्कुलमा कार्यक्रम चलाउने योजना छ, गरे सम्भव छ, हामी सक्छौँ”, कल्पनाले आगामी योजना सुनाउँदै भन्नुभयो । आफू पढेको स्कुलबाट उहाँले पहिलो अभियान थाल्नुभएको हो तर आफूलाई धेरैको साथ आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षक बलियो हुनुपर्छ
मुलुकमा अहिले चलिरहेको शिक्षा प्रणालीलाई उहाँहरु घोकन्ते विद्या हो भन्नुहुन्छ । त्यसबाट शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । शिक्षक, शिक्षा प्रणालीदेखि समाज नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको महर्जनले बताउनुभयो । अभियानमा उहाँहरुले शिक्षकसँगै आफैँ बाल विवाहको अनुभव लिएका महिलालाई नै सहभागी गराउने योजना छ । अभियानका अध्यक्ष महर्जन भन्नुहुन्छ, “शिक्षक बलियो भयो भने कल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सम्भव छ ।”
हाल अभियान चलाएको विद्यालयमा शिक्षकलाई पनि आचारसंहितामा बाँधिएको छ । शिक्षकको हाजिरी, बालबालिकाको उपस्थिति, परीक्षा प्रणाली, बैठक सबै लिखितरुपमा अभिलेख राखिन्छ । कमि कमजोरी के भयो ? स्कुल मै छलफल गरी मुल्याङ्कन गरिन्छ ।
समग्र विद्यालय व्यवस्थापनको अबस्था के छ ? के सुधार गर्नुपर्छ ? र के राम्रो छ ? सबै मुल्यङ्कन गरेर कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्दा क्रमशः सुधारका सङ्केत देखिन थालेको महर्जनको अनुभव छ । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक बहादुर महर्जन दुवै संस्थाको सहकार्यमा स्कुलमा आमूल परिवर्तन भएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । कुनै बेला बन्द हुन लागेको स्कुलमा अहिले नर्सरी कक्षादेखि ६ सम्म पढाइ हुन्छ ।
‘शान्ति शिक्षा अभियान नेपाल’ले झण्डै एक दशक अघिदेखि काम गर्दै आएको थियो । ललितपुरको इमाडोलका रविन्द्र महर्जनको अगुवाइमा बुढानीलकण्ठ स्कुलका सात जना विद्यार्थी मिलेर शुरु गरिएको थियो । सरकारी स्कुल र नीजि स्कुलको पढाइमा हुने अन्तर घटाउने उद्देश्य राखेर अभियान थालिएको थियो ।
रविन्द्रको समुहले दाताको सहयोग लिएर सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा तीन कक्षासम्म पढ्ने स्लुक नै बनाएकाे थियाे । पर्यटक पथपर्दशक महर्जनसँग बेलाबेलामा विदेशी ठोक्किन्थे । योजना सुनेपछि मन पग्लेर विदेशीले केही रकम दिन्थे । त्यही पैसा शिक्षाको विकासमा लगानी गरिन्थ्यो ।
एक दिन अमेरिकन नागरिक क्रिष्टोफरले दिएको १५० डलरले राम्चेको स्कुलको जग खनिएको थियो । स्कुल पूर्ण हुँदा ४३ लाख लाग्यो । त्यो पैसा जुटाउन परेको सकस अहिले पनि उहाँ झलझली सम्झनुहुन्छ ।
अभियानमार्फत संस्थाले स्कुल शिक्षाका लागि २५० भन्दा बढीलाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ । स्वदेशी र विदेशी स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने गरेको छ । संस्थाले विभिन्न १४ भन्दा बढी स्कुमा फर्निचर सहयोग गरेको छ । बालविकास तालिम दिने गरेको छ । २०७२ काे भूकम्पअघि १८ वटा स्कुलमा भवन बनाएको संस्थाले भूकम्पपछि २४ वटा स्कुलको पुनःनिर्माण गरेको महर्जन सुनाउनुहुन्छ ।